फोर्ड एभरेष्टको बुकिङ्ग खुल्ला - Arthatantra.com
फोर्ड एभरेष्टको बुकिङ्ग खुल्ला
काठमाडौं । नेपालको लागि फोर्ड गाडीको आधिकारिक विक्रेता जि.ओ. अटोमोवाइल्सले २.० लि. वाई– टर्वाे डिजेल इन्जिन र विश्वमै पहिलो १० स्पीड अटोकेटिक ट्रान्समिसन भएको फोर्ड एभरेष्ट को घोषणा गरेको छ । यसको शुरुवाती नेपाली मूल्य १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
अफ–रोडका उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने गाडीको सर्भिसिङ्ग मूल्य अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।
विश्व बजार र एसिया क्षेत्रमा फोर्ड एभरेष्ट एकदमै लोकप्रिय एसयूभी हो । पहिलो पटक २००३ मा बजारमा आएको फोर्ड एभरेष्टको अहिलेको दोस्रो संस्करणको मोडल २०१५ देखि बजारमा उपलब्ध भएको थियो । परिवारसँगको यात्रा फोर्ड एभरेष्टले एकदमै आरामदायी बनाउँछ ।
ठूलो गाडी भए पनि एभरेष्ट चलाउन एकदमै सजिलो भएको र लाइट स्टेरिङ्गले पाकिङ्ग गर्दा पनि सहज महसुस गराउँने उल्लेख छ । यस बाहेक, इन्जिनमा भएको पर्याप्त टर्कको मद्दतले आवश्यक आक्सिलेरेसन पनि सजिलै बढाउन मिल्छ । यस्ता आकर्षक फिचरहरुले फोर्ड एभरेष्ट गाडीलाई ड्राइभिङ्ग गतिशीलतामा विशेष बनाउने उल्लेख छ ।
फोर्ड एभरेष्टमा अल न्यू कन्टेम्पोरेरी स्क्वायर डिजाइन ल्याम्प क्लस्टर डिजाइनको अल–एलइडी हेडल्याम्पस् छ । एलइडी हेडल्याम्पस् ले रातीको समयमा विशेष लो र हाई–बमि दुबैमा २०% धेरै प्रकाश दिन्छ । फोर्ड एभरेष्टको आधुनिक २.० लि. वाई –टर्बो डिजेल इन्जिन ले इन्धनको क्षमतामा कुनै अवरोध नगरी २१३ पीएस को पावर र ५०० एनएम सम्मको टर्क दिने उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १८ सोमवार १२:१९ मा प्रकाशित
News Views: 139
अघिल्लाे प्रभु क्यापिटलको डबल धमाका अफर
पछिल्लाे दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल, प्रतिकित्ता कुनको कति बढ्यो ?